SplikTV Apk Khuphela ye-Android [iMovies+Uthotho]-Luso Gamer
Ukusasaza iimuvi zeprimiyamu kunye nochungechunge bezisoloko zithathwa njengento yokuzonwabisa ebiza imali eninzi. Kuba ixabiso lomrhumo lingagqitha kumakhulu eedola. Yiyo loo nto sigxile kufikeleleko lwasimahla nolulula kwiividiyo apha sibuyile ngeSplikTV Apk.
Enyanisweni, i Imovie App ngowona mthombo ulungileyo kwi-intanethi ovumela abasebenzisi be-Android ukuba basasazeke. Isiqulatho sokuzonwabisa esingenamda simahla ngaphandle kobhaliso okanye ubhaliso. Ekuphela kwento abayifunayo luguqulelo lwamva nje lwefayile ye-Apk.
Khumbula ngaphandle kokuba noqhagamshelo lwe-intanethi oluzinzileyo, akunakwenzeka ukuba usasaze iifilimu. Nangona kuqwalaselwa intuthuzelo yombukeli, apha iingcali zifakela iiseva ezikhawulezayo. Ke uyathanda ukusasaza ukuzonwabisa okungapheliyo ngeqonga emva koko ukhuphele iSplikTV App.
Yintoni iSplikTV Apk
I-SplikTV Apk yindawo yokuzonwabisa ekwi-intanethi apho abasebenzisi be-Android banokubukela iimuvi ezingenamkhawulo kunye nothotho. Ngapha koko, abaphuhlisi bongeza iindidi ezininzi ezinxulumene neMiboniso yeTV kunye ne-IPTV's. Nangona kunjalo, asizange sifikelele kwezo ndidi okwangoku.
Kutheni sinyanzela abathandi bokuzonwabisa ukuba bafake isicelo esithile. Ukuba abantu babenokufikelela ngokuthe ngqo kumaqonga adumileyo akwi-intanethi? Isizathu saloo nto kungenxa yeendleko ezibiza kakhulu kunye nemirhumo yokubhalisa yenyanga.
Siyavuma, maninzi amanye amaqonga adumileyo afikelelekayo kwi-intanethi. Nangona kunjalo ukuphonononga la maqonga adumileyo kufuna ilayisensi yobhaliso lweprimiyamu. Ngaphandle kokuba nelayisenisi, akunakwenzeka ukufikelela kwezo webhusayithi zepro.
Ke kugxilwe kwiindleko ezibizayo kunye nomxholo ojolise kwilizwe elithile. Apha ekugqibeleni siphumelele ukuzisa SplikTV Android. Oko kusimahla ukukhuphela kwaye akukho mrhumo okanye ubhaliso lokufikelela kwideshibhodi ephambili kunye neevidiyo.
ubungakanani 4.9 MB
Igama lepakheji com.splikdev.tv
Iyafuneka i-Android 5.1 kunye noHlanganiso
Ekuphela kwento abayifunayo luguqulelo lwamva nje lwefayile ye-Apk. Oko kuyahambelana nazo zonke ii-smartphones ze-Android. Ukusuka apha abasebenzisi be-android banokukhuphela ngokulula ifayile ye-app yamva nje. Khuphela nje usetyenziso oluhlaziyiweyo, emva koko uludibanise ngaphakathi kwe-smartphone.
Ngelixa sigrumba nzulu siye safumana iindlela ezininzi ezahlukeneyo ngaphakathi. Ezo ziNqanaba eziTyebileyo, isihluzi soPhando lweSiko, Isikhumbuzi seSaziso, iiseva eziphendulayo, uMdlali weVidiyo owakhiweyo, uMphathi wokuKhuphela kunye neNgcaciso yokuSeta iNgcaciso njl.njl.
Sele sikhankanyile malunga neeSeva eziphendulayo kodwa ulibale ukongeza le ngongoma eyongezelelweyo. Ezo seva ziya kuzilanda ngokuzenzekelayo ababukeli uqhagamshelo lwe-intanethi. Masithi ukuba umbukeli ufumana ingxaki yokufumana uqhagamshelo lwe-intanethi olugudileyo.
Emva koko iiseva eziphendulayo ziya kuhlengahlengisa ngokuzenzekelayo umgangatho wostrimisho kwaye ziqinisekise umsinga oqhubekayo. Isihluzi sokukhangela esiqhelekileyo siya kunceda abasebenzisi be-android ekufumaneni iifayile ngoko nangoko. Isikhumbuzi sesaziso sokucofa siya kunceda ekugcineni abasebenzisi benolwazi malunga nokufakwa kunye nohlaziyo.
Isidlali seVidiyo esakhiweyo sinokunceda ukulungelelanisa isimbo sangoku sokubukela. Kwaye umphathi wokukhuphela uyaqinisekisa ukuba umsinga unikezelwa kwimo engasebenziyo. Ukuba uyazithanda zonke ezi mpawu zesicelo emva koko faka iSplikTV Khuphela.
Oko kubandakanya zombini iiMovie kunye neeNkqubo.
Imiboniso yeTV kunye neeNkcukacha nazo ziyafumaneka.
Akukho IPTVs zifumanekayo ukufikelela.
Isihluzi sokuKhangela esiSiko siya kunceda ekufumaneni iifayile ngokulula.
Isikhumbuzo sokukhumbuza siya kunceda ukugcina abasebenzisi banolwazi.
Uyikhuphela njani iSplikTV Apk
Xa kuziwa ekukhupheleni inguqulelo yamva nje yeefayile ze-Apk. Abasebenzisi be-Android banokuthembela kwiwebhusayithi yethu kuba apha kwiwebhusayithi yethu sinika kuphela iifayile ze-Apk eziyinyaniso kunye neyoqobo. Ukuqinisekisa ukhuseleko lomsebenzisi kunye nemfihlo.
Siqeshe iqela leengcaphephe eliquka iingcali ezahlukeneyo. Ngaphandle kokuba siqinisekile ngokusebenza kakuhle kweefayile ze-Apk. Asikhe sinikeze ezo zingaphakathi kwicandelo lokukhuphela. Ukukhuphela uguqulelo oluhlaziyiweyo lweSplikTV 1.3 nceda ucofe kwikhonkco elinikiweyo elingezantsi.
Ifayile ye-app esiyibonisayo apha yeyoqobo kwaye ayifuni mrhumo. Nangona inokufuna ikhowudi yokuvula. Nangona kunjalo ikhowudi inokufumaneka ngokuthe ngqo kwiwebhusayithi esemthethweni. Emva kokufaka i-app asifumananga ngxaki ngqo ngaphakathi.
Inani elaneleyo leeapps zokuzonwabisa ezifanayo zipapashwa apha kwiwebhusayithi yethu. Ukufakela kwaye ukonwabele ezo ezinye izicelo nceda ulandele amakhonkco. Ezizi Wovie TV Apk kwaye Umdlali weHDO Apk.
Ukuba uwedwa, ubambeke kwindawo enye kwaye awufumani msebenzi wumbi ngaphandle kokulala. Ke kwimeko enjalo, sicebisa abasebenzisi be-Android ukuba bafake iSplikTV Apk. Oko kuyafikeleleka ukufikelela kwiwebhusayithi yethu ngokucofa okukodwa simahla.
iindidi ukonwatyiswa, apps tags Imovie App, SplikTV Android, SplikTV Apk, SplikTV App, SplikTV Khuphela Post yokukhangela